Manamboatra crème patissière
Ny crème patissière dia ilay krema ampiarahina amin’ny mofomamy toy « pate à chou » ny « mille feuille », ny « tarte ». Fomba tsotra hanamboarana azy ity atolotra anao ity satria misy karazany maro ihany ny fanamboarana ny « crème patissière »
Akoho amin’ny poavrao nandrahoina ao anaty lafaoro
Akora ilaina Fen’akoho 2 voatabia 1 Povrao maitso 1 Poavrao mena 1 tongolo be 1 sira sy dipoavatra Menaka oliva 2 sf Rano ½ vera
Ireo sakafo mafilotra, asiana kafe
Maro ny sakafo azo karakaraina miaraka amin’ny kafe fa tsy mijanona eo amin’ny fisotroana azy maraina fotsiny.
Akora ilaina · Nofona drakaka 400g · Zavoka 3 · Atody 4 · Voasarimakirana 1 · Saosin’ilay trondro 30sl · Kotomila efa voatetika 4 sf · Tongolo maitso 2 sf · Ravina gélatine 6 · Vovon-tsakay mena · Sira sy dipoavatra
Dibera vita ao an-trano Fomba voalohany
Akora ilaina · Ronono manta 1l ½ Fomba fikarakarana azy 1. Araraka ao anaty koveta plastika ny ronono efa masaka dia tsy ahetsiketsika mihitsy 2. Rehefa mipetraka ela dia mitsingevana ilay krema
Ny atody sy ireo sakafo mazika vitany
Andeha haka ity akora iray ity isika anio fa maro ireo sakafo mazika vita avy aminy. Manomboka any amin’ny fanokafam-bavony ka hatrany amin’ny saosy, afaka hampiasàna azy avokoa. Vitsivitsy amin’izy ireo ireto atolotra anao ireto:
1. Tetehina lavalava ny fraomazy, araka izay habeny tiana
2. Efa samy atokana ao anaty lovia tsirairay ny lafarinina sy ny atody efa nokapohina ary ny sesame
3. Ampandalovina ao anatin’ny lafarinina ny fraomazy, alefa ao anaty atody indray avy eo ary faranana amin’ny famonosana azy amin’ny sesame izany
4. Hafanaina ny menaka. Tsy atao mahamay be loatra
5. Endasina ary atao izay hahazoan’ny lafiny efatra loko tsara
6. Rarahana tantely, rehefa mendy
7. Tetehina ny persily na ny solila, araka izay nosafidiana
8. Aroso miaraka amin’ny tetika voasarimakirana